रू रू जलविद्युत परियोजनाले फागुन ७ गते आईपीओ निष्कासन गर्ने - CNN EXPRESS
रू रू जलविद्युत परियोजनाले फागुन ७ गते आईपीओ निष्कासन गर्ने
माघ २८, काठमाडौं । रू रू जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले आगामी फागुन ७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले रु १०० प्रति शेयरका दरले ४ लाख ७ हजार ७०५ कित्ता साधारण शेयर आयोना प्रभावित स्थानीयहरुका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो ।
गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ का आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ४ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ । निष्कासन बन्द फागुन २१ गते रहेको छ भने आवेदन कम परेमा ढिलोमा चैत ८ गते बैंकिङ्ग समयसम्म आवेदन खुला रहने छ ।
प्रदेश ५ को गुल्मी जिल्लाको चद्रकोट गाउापालिका वडा नं. ६ र ७ मा निर्माण भएको उक्त जलविद्युत् आयोजनाले वि.सं. २०७१ चैत ९ गतेदेखि ५ मेघावाट विद्युत् व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरीसकेको छ। यो अयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत रु १४ करोड ८९ लाख ४ हजार ३८२ रहेको छ ।
Previous: पूर्व राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा व्यापक कटौती
Next: दाहाल–नेपाल समूहले बृहत प्रदर्शन गर्दै, ५ ठाउँबाट जुलुस निकाल्ने, दुई लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी